I-FAQ-I-NINGBO MINGYU YOKWENZA UMBONO WOKWENZA, LTD
Imigaqo ulondolozo Basic for isitofu ngenaliti
loluphi uhlobo lokungunda iMingyu Mould ekhethekileyo?
Mingyu Ikubumbe eneemfuno ezizodwa zeplastiki sokubumbela, ingakumbi iindawo Auto sokubumbela, isixhobo isixhobo ekhaya, ukupakisha ukungunda, inxalenye elektroniki sokubumbela kunye neentlobo ngqo sokubumba.
Zingaphi izinto zokubumba onokuzenza minyaka le?
Senza ngaphezulu kwe-100 iiseti ngenaliti ukungunda minyaka le, zombini kwiimarike zalapha kunye neemarike zangaphandle.
Sithumele kumazwe amaninzi aphesheya, njenge Mexico, Mexico, Colombia, Malaysia, Indonesia, Thailand, Russia, Israel, Dubai, Poland, Serbia, South Africa, njl.
50% intlawulo kwangaphambili yi T / T, 50% eseleyo yi T / T okanye L / C phambi ngolwandle.
lithini ixesha lokuhambisa ukungunda?
Ngokubanzi, umhla woku-1 wokuvavanya ukungunda ziintsuku ezingama-40 ~ 60 emva kokufumana intlawulo kwangaphambili kunye nokuqinisekisa imizobo. (Ukungunda okungafaniyo kunokuba kungafani). emva koko siya kuthumela iisampulu zetyala lokujonga abathengi kunye nokuqinisekisa. ukuba konke kulungile, siya kwenza unyango lokugqibela kwaye sipakishe ukungunda ukubenza balungele ukuthunyelwa.
loluphi ulwazi olufunekayo ekubuzeni ukungunda?
iinkcukacha photos imveliso kunye lobukhulu kunye nobunzima info ziyafuneka ukuze yophando nokuvunda. Ewe, ukuba unemizobo ye-3D yemveliso, kuya kuba ngcono kakhulu.
Buyintoni ubungakanani besikhunta?
Ubungakanani besiseko sokubumba esaneleyo sibonelela ngamandla afanelekileyo kunye nokuzinza kokusebenza kwenaliti yokubumba, zama ukwehlisa ixabiso lokungunda ngenaliti ngokungonelanga kobungakanani bomngcipheko wokungunda.
Yintoni esetyenziswa sentsimbi sokubumbela?
Kukho iintlobo ngeentlobo zesinyithi ngaphandle, ukusebenza kwazo kunomahluko omkhulu, umahluko ukwabonakala kwixabiso leyunithi. I-P20 pre-harden iron ixabisa kuphela i-20RMB / kg, ngeli xesha yenze lukhuni intsimbi 1.2343 ukuya kuthi ga kwi-80RMB / kg ukusuka kwi-LKM.
Siya kuhlonipha iimfuno zabathengi zentsimbi esetyenzisiweyo, ewe, siya kuphakamisa ngokwemveliso eyahlukeneyo.
Zingaphi iibhulukhwe ezimfutshane eziqinisekisiweyo kumjikelo wokubumba?
Qinisekisa ukuba ufumana ukuzibophelela ekuqinisekiseni ukuba ukungunda ngenaliti kunokugcwalisa ngokupheleleyo iimfuno zakho zemveliso.
Uthini umgangatho wokufikelela?
Ukubumba yenzelwe kwaye isincedisi kufuneka isicelo kumgangatho apho nokuvunda run ziphene yokubumba ukunciphisa ulondolozo nokuvunda. Umgangatho onganyanzelekanga weYurophu yi-HASCO, eMntla Melika yi-DME.
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukwenza uyilo lokungunda?
Kuxhomekeke kubunzima benxalenye / isakhiwo sokubumbela, iya kuthatha iintsuku ezingama-2-3 kulwakhiwo lwe-2D, iintsuku ezingama-3-5 zoyilo oluneenkcukacha ze-3D.
Ngaba iindleko zoyilo zokubumba zibandakanyiwe kwisibonelelo?
Idatha yoyilo imele ukubonelelwa kwaye igunyaziswe ngumthengi, ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo yoyilo okanye ukuguqulwa koyilo.
Uyenza njani ulawulo lokwenza ukungunda?
Njengokuba umthengi ekude kakhulu nalapho umzi-mveliso wase China ubumbayo, ishedyuli exineneyo necwangciswe kakuhle kufanele ukuba ingeniswe kunye nengxelo yokulandela umkhondo ngeveki ebonisa ngokucacileyo umenzi wenaliti yenaliti.
yintoni umahluko phakathi kwensimbi NAK80 kunye ne-S136
I-NAK80 sisipili esenziwe kwangaphambili seplastikhi yesinyithi. I-S136 luhlobo lomoya olungenasici ngaphandle kobulukhuni, sisipili esenziwe ngesipili sentsimbi yokubumba nge-anti-corrosion kunye ne-anti-rust function.
I-NAK80 sisinyithi esenziwe lukhuni sangaphambi kobunzima be-EX-mveliso HRC38-41. Ukubopha i-S136 kunokuba yi-HRC48-52 emva konyango lobushushu.
NAK80 isipili wokucoca angafikelela 10000-12000 umnatha. Umgangatho ophezulu we-S136 unokufikelela kwi-12000-18000 mesh emva konyango lobushushu.
Izihlandlo: I-NAK80 isetyenziselwa iimveliso zeplastikhi ezinamacala abonakala esipili, kwaye ayifuni anti-rusi. S136 ingasetyenziselwa isipili iimveliso zeplastiki olukhazimlisiweyo, ezifana: iimveliso zeplastiki isipili enombala, kunye ngumngundo zeplastiki ezifuna anti-umhlwa kunye nemisebenzi anti-umhlwa.
Ngokubanzi,isinyithi esisetyenziswa ngababoneleli baseTshayina abathengisa ngesiqhelo sithengwa kwi-LKM, i-LKM sesona siseko sombumba sikhulu / somthengisi wensimbi eAsia, izatifikethi zonyango kunye nobushushu ziyafumaneka.